सेयर बजारका लगानीकर्तालाई मार्गदर्शन दिने यी ५ पुस्तक, तपाईंले पढ्नुभयो ?
काठमाडौं : कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा जतिसक्दो छिटो लगानी गर्न सुरु गर्यो त्यति नै राम्रो मानिन्छ । छिटो लगानी गरी सबल कम्पनीमा दीर्घकालीन समयसम्म होल्ड गर्दा यसबाट जो कोहीले पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछ । केही वर्ष छिटो मात्र लगानी सुरु गर्न सके पनि लाखौं नभए पनि दसौं हजार रुपैयाँ अतिरिक्त प्रतिफल आफ्नो अवकाष कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । छिटो लगानी सुरु गर्दा आम्दानी पनि छिटो बढ्छ र पोर्टफोलियो पनि ठूलो हुँदै जान्छ ।
तर, चाँडै लगानी गर्नु जति महत्वपूर्ण छ, बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नु त्यो भन्दा झन् महत्वपूर्ण विषय हो । सही ज्ञान भएन भने छिटो लगानी सुरु गर्नु पनि बालुवामा पानी खन्याए बराबर हुन जान्छ । यसो भए, सही लगानी गर्ने कसरी ? यसको उत्तर सामान्य छ : अध्ययन । तसर्थ, कलेज बढ्दै गरेकाहरुलाई पनि लगानी गर्न सहज बनाउने किसिमका ७ वटा पुस्तकहरुको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१) द लिटल बुक अफ कमन सेन्स इन्भेष्टिङ – जोन सि. बोगल
जोन सि बोगलको यस पुस्तकलाई हरेक उमेर समूहका लगानीकर्ताले बढ्नैपर्ने पुस्तकका रुपमा लिने गरिएको छ । बोगललाई विश्वकै पहिलो ‘इन्डेक्स फन्ड’ को सुरुवातकर्ताको श्रेय जान्छ । प्रस्तुत पुस्तकमा बोगलले न्यून जोखिम भएको पोर्टफोलियो निर्माणका लागि फ्रेमवर्क दिने प्रयास गरेका छन् । साथै, विविधिकरण गरिएको पोर्टफोलियो निर्माणका लागि आइडिया दिएका छन् ।
२) अ बिगिनर्स गाइड टु द स्टक मार्केट–म्याथ्यू आर क्राटर
सेयर बजारको अनुभव नभएका युवा लगानीकर्ताका लागि म्याथ्यू आर क्राटरको यो पुस्तक निकै फाइदाकारी हुनसक्छ । क्राटरले सेयरहरुको प्रकार र तिनीहरुले कसरी काम गर्छन भन्ने विषयको पनि चर्चा गरेका छन् । पुस्तकबाट लगानीकर्ताले ‘सर्ट टर्म’ र ‘लङ टर्म’ मा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने सेयरहरु विश्लेषण गर्न पनि सक्नेछन् । क्राटरले पुस्तकमार्फत युवा लगानीकर्ताले गर्न सक्ने गल्ती र त्यस्ता गल्तीलाई सुधार गर्ने उपायका बारेमा पनि सम्बोधन गरेका कारण यस पुस्तकलाई नयाँ तथा युवा लगानीकर्ताले पढ्नैपर्ने मानिएको हो ।
३) ब्रोक मिलेनियल – इरिन लोरी
पप कल्चरमा सन् १९८० को दशकको सुरुवातदेखि १९९० को दशकको अन्तिमसम्ममा जन्मिएका व्यक्तिहरुलाई ‘मिलेनियल्स’ भन्ने गरिन्छ । ‘ब्रोक मिलेनियल’ मा सोही समयमा जन्मिएका व्यक्तिहरुको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विषयहरु समावेश गरिएको छ । लोरीले यस पुस्तकमा सानो उमेरदेखि नै रिटायरमेन्टसम्मको वित्तीय योजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न टिप्सहरु दिएकी छिन् ।
साथै, सानो पुँजीबाटै प्रभावकारी लगानीकर्तामा रुपान्तरित हुन आवश्यक टिप्सहरु पनि प्रदान गरेकी छिन् । लोरी आफैं पनि मिलेनियल वर्गमा पर्दछिन् । तसर्थ, उनको पुस्तकलाई युवा लगानीकर्ताले पढ्नैपर्ने मानिएको हो ।
४) वान अप अन वाल स्ट्रिट – पिटर लिन्च
पिटर लिन्च वाल स्ट्रिटका सफल र निकै अनुभवी लगानीकर्ता हुन् । ‘वान अप अन वाल स्ट्रिट’ मार्फत युवा लगानीकर्ताले बजारका अनुभवी लगानीकर्ताहरुको लगानी रहस्य थाहा पाउन सक्छन् । पुस्तकमा लिन्चले सेयर बजारमा अनुसन्धान कसरी गर्ने, सही सेयर कसरी पत्ता लगाउनेलगायत विषयमा पनि मार्गनिर्देशन गरेका छन् । साथै, ‘टेनब्यागर’ अर्थात १० गुणसम्म भ्याल्यू बढ्ने सेयरहरु पत्ता लगाउन मद्दत मिल्ने टिप्सहरु पनि दिएका छन् ।
५) थिकिंङ फास्ट एन्ड स्लो – ड्यानियल कानम्यान
ड्यानियल कानम्यान सन् २००२ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार विजेता हुन् । कानम्यानको पुस्तक ‘थिंकिङ फास्ट एन्ड स्लो’ ले मानिसको निर्णय गर्ने पद्दतिको बारेमा चर्चा गरेको छ । मानिसले विवाह, करियर तथा लगानीलगायत आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण निर्णयहरु कसरी गर्दछ भन्ने विषयमा पुस्तकले ज्ञान प्रदान गर्दछ ।
मानिसले यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु अधिकतर समय तथ्यका आधारमा नभई भावनाका आधारमा गर्छ र त्यस्तो निर्णयले वित्तीय भाविश्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ । पुस्तकमा सही लगानी निर्णय कसरी लिने, लगानीबाट मनोभावनालाई कसरी टाढा राख्नेलगायत विषयमा पनि कानम्यानले प्रष्ट पारेका छन् ।